minthantzaww: Love Coffee ညစ်ညမ်းကော်ဖီ
“သ င်္ကြန် အ တွင်း မိန်း က လေး များ အ ထူး သ တိ ပြု ရ မည့် ကာ မ စိတ် ကြွ စေ နိုင် သည့် ကော် ဖီ မစ်” ဆို တဲ့ သ တိ ပေး သ တင်း တ ခု ကို (ဖေ့စ် ဘွတ်) မှာ အ ခု တ လော တွေ့ ရ ပါ တယ်။ ဒါ နဲ့ လေ့ လာ ကြည့် တော့ ဒီ လို ဒီ လို တွေ့ ရ ပါ တယ်။
ကော် ဖီ မစ် တော့ မ ဟုတ် ပါ။ တ ရုပ် လုပ် ဖြစ် ပါ တယ်။ Love Coffee (XS-X0014-D) လို့ အ ရောင်း ကု မ္ပ ဏီ ရဲ့ ဝက်ဘ် ဆိုက်မှာ တွေ့ ရ ပါ တယ်။
Aphrodisiac coffee products "လိင် စိတ် အား ပေး စေ တဲ့ ကော်ဖီ" လို့ ရေး ထား ပါ တယ်။ ကြော် ညာ တဲ့ ဆိုက က ရေး ထား တဲ့ အ င်္ဂ လိပ် စာ က အ မြီး အ မောက် သိပ် မ တည့် တာ လည်း သ တိ ထား မိ ပါ တယ်။ ကြော် ညာ ထဲမှာ (ပရက် ဆီးဒင့်) ဆို သူ ဟာ ဒီ ကော် ဖီ ဆို တာ သောက် ပြီး ၁ဝ မိ နစ် နေတော့ အ သက် ရှူ မ ဝ သ လို ဖြစ် လာ၊ ခေါင်း ထဲ ရှိ တာ ကို ဖွင့် ပြ ချင် လာ၊ ဆန့် ကျင် ဘက် လိင်နဲ့ အ တူ နေ ချင် လာ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ်။
3000 mg ပါတဲ့ ၄ ထုပ်ကို စက္ကူ ဘူးမှာ ထည့်ပြီး ရောင်းချ ပါ သတဲ့။ တထုပ်ကို ရေနွေး ပူပူ ၁၅ဝ စီစီ ထဲမှာ ဖျော် ရတယ်။
သတိ ပေးချက် တွေလည်း ရေးထား ပါသေး တယ်။ အသက် ၁၈ နှစ် အောက် မိန်း ကလေး များ မ သောက်ရ။ မဖွယ် မရာ လိင် ဆက်ဆံ ရာမှာ မသုံးရ။ ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေရင် ရှောင်ကျဉ်ပါ။
ဒီ ကုမ္ပ ဏီရဲ့ ထုတ် ကုန် စာ ရင်း ထဲမှာ ဒါ တွေ လဲ ပါ သေး တယ်။
1. Slimming Products Slimming Products ပိန်ဆေး၊ = ဆေးတောင့်၊ ဆေးပြား၊ ကော်ဖီ၊ ဆေးရွက်၊ ဆေးမှုံ့။
2. Male and female health products Man and woman Sex products ယောက်ျားသုံး၊ မိန်းမသုံး ကျန်းမာ ရေးနှင့် လိင်ဘက် ဆိုင်ရာ ထုတ် ကုန်များ = ကွန်ဒွမ်၊ လိင် ဆေး တောင့်၊ လိင် ဆေးပြား၊ ဗိုင် ယာ ဂရာ (ပန်း သေခြင်း အတွက် ဆေး)၊
3. Woman sex products Woman sex products မိန်းမသုံး လိင်ဘက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ။ အခု ပြော နေတာ က ဒီခေါင်း စဉ် အောက် ကပါ။
တရုပ် နိုင်ငံ၊ ဖူဂျီယန်၊ ဖူဇိုး မြို့က ထုတ်နေ တာဖြစ် ပါတယ်။
• MAXIDUS Capsules ကောင်းဆေး၊ ကြာဆေး၊
• Kamagra-100 Sildenafil Citrate Tablets ပန်းသေ-ပန်းညှိုး အတွက် ဆေး၊
• Chong Cao Zang Bian Bao male enhancement ကျား အင်္ဂါ ကြီးဆေး၊
• Mens Coffee ယောက်ျား သောက် ကော်ဖီ၊
• Ten days erection ကျား အင်္ဂါ သန် မာ စေ မဲ့ ဆေး၊
• STIFF NIGHTS ကျား- စိတ် လာ ဆေး၊
• Love Coffee မ- စိတ် လာ ဆေး စတဲ့ တခြား ဆေး အ မျိုးမျိုး တွေလည်း ရောင်း တယ်လို့ ကြော် ညာမှာ ပါတာ ဖတ် ရ ပါ တယ်။
ကြော် ညာ မှန်း သိ တာ တာ နောက် တ ချက်က သူ့ ဝက်ဘ် ဆိုက်ကို ဖွင့် နေရင်း ဆေး အရောင်း ကိုယ်စား လှယ်က We are online ကျွန်တော် တို့ အွန်လိုင်း မှာရှိ ပါတယ် ဆိုပြီး အသိ ပေးချက်က တောက်လျှောက် ထွက်နေ ပါတယ်။ FDA ခေါ်တဲ့ အစိုးရ ကနေ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက် မပါတာ သတိထား ရပါမယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးနဲ့ ထိရောက်မှု အတွက် သုတေ သန လုပ်ထား တာတွေ မတွေ့ ရပါ။
Posted by minthantzaww at 09:57
ye kyaw thu said...
အကို ကြီးဆေးဝယ်ချင်လို့ပါ ဘယ်လိုလပ်ရမလဲ